Yakakura dhayamita HDPE Hollow-madziro Akazvimoneredza Pipe Extrusion Line - China Yakakura Dhayamita HDPE Hollow-madziro Akazvimoneredza Pipe Extrusion Line Mutengesi, Fekitori -Jwell
Yakakura Dhayamita HDPE Hollow-madziro Akazvimoneredza Pipe Extrusion Line
Yakakura dhayamita HDPE isina mhango-yakazvimoneredza pombi ndeimwe yeakanakisa kutsiva kwesimbi pombi. Jwell ndomumwe wevatangi vekutanga vanokwanisa kumutsara uyu. Isu tine simba rakasimba rehunyanzvi uye ruzivo rwakapfuma mukugadzira pombi ichipa yakanakisa pombi muchina, hunhu hwakadzikama kuita uye nyore kushanda. Iyo yakazara indekisi yeJwell muchina inosvika kune epamba Top nhanho.
2, inoumbwa nemusoro inoshandiswa neyakajeka kutenderera mhando yekuumba ine hunyanzvi chimiro uye yakasarudzika dhizaini kuverengera chigadzirwa mhando;
3, pombi chigadzirwa ine yakasimba mhete kuomarara, kuchera kushandiswa anti-static mashgas drainage uye pedza pombi dzinogona kugadzirwa nemuchina uyu;
4, yakakosha pombi batanidza neyakareruka mashandiro uye hupfumi kuvaka.
mota simba (kw)
JW75 × 30 / JW55 × 30
JW90 × 30 / JW65 × 30
JW100 × 30 / JW75 × 30
JW120 × 30 / JW75 × 30
JW150 × 30 / JW90 × 30
Sheet Yekufa Series-JW-P-D1
PVC Multi Rukoko Heat Insulation Corrugated Bhodhi Inowedzera Mutsara
PC Sheet Kubvisa Mutsetse